Ny maha-zava-dehibe ny fahasalamana ara-pihetseham-po amin'ny ankizy | Bezzia
Maria Jose Roldan | 09/07/2021 20:58 | Ampianaro ny ankizy
Vitsy ny ray aman-dreny mahalala marina ny atao hoe faharanitan-tsaina. Ity lafiny ity dia tsy voamariky tanteraka raha ampitahaina amin'ny fampisehoana an-tsekoly sy naoty tsara amin'ny faran'ny fampianarana.
Na izany aza, ny fahasalaman'ny zaza ara-pihetseham-po dia manan-danja mitovy amin'ny valiny any am-pianarana. Ny ankizy dia tsy maintsy miomana hatramin'ny fahazazany, afaka mifehy ny fihetsem-ponao sy mitantana azy ireo amin'ny fomba tsara indrindra.
1 Ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana ara-pihetseham-po amin'ny ankizy
2 Fomba entina manatsara ny fahasalaman'ny ankizy
Ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana ara-pihetseham-po amin'ny ankizy
Ny fampianarana ara-pientanam-po dia tsy ampianarina any an-tsekoly ary ianarana mandritra ny taona maro, miankina amin'ny fifandraisan'ny ankizy amin'ny tontolo iainany. Ny fananana fanabeazana ara-pihetseham-po tsara sy sahaza dia mahatonga azy ireo ho olona an-taonany maro izay miara-miombom-pihetseham-po amin'ny hafa ary manam-pahalalana rehefa afaka mifandray.
Ho fanampin'izany, ny fahasalamana ara-pihetseham-po tsara dia fanalahidy raha ny amin'ny fanamafisana ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan-tena. Ny ankizy dia afaka mino ny tenany sy izay azony atao amin'ny fiainana.
Fomba entina manatsara ny fahasalaman'ny ankizy
Avy eo dia hanome andian-torolàlana na torohevitra ho anao izahay Hanampy anao hampatanjaka sy hanatsara ny fahasalaman'ny zanakao izy ireo:
Zava-dehibe ny fanamafisana ny fahasalamana ara-pientanam-po toy izany hatramin'ny andro nahaterahan'ny zaza herinandro vitsivitsy. Ny fitiavan'ny ray aman-dreny sy ny fitiavany ny ray aman-dreny no tena ilaina mba hahatonga ny fifamatorana hiray saina na hitombo kely. Ny fihetsika tsotra hijerena azy na hikolokoloana azy manerana ny vatany, zava-dehibe amin'ny famolavolana ny fahaizanao ara-pientanam-po.
Ao anatin'ny fahasalamana ara-pientanam-po, ny fahaizana mametraka ny tena eo amin'ny toeran'ny zaza sy mihaino azy rehefa ilaina dia zava-dehibe indrindra. Ny olana lehibe eo amin'ny fanabeazana ankehitriny dia ny tsy fihainoan'ny ray aman-dreny ny zanany, izay mahatonga ny fahasalaman'izy ireo ara-pihetseham-po hanimba tanteraka. Tsy misy na inona na inona hahatratra ireo ankizy, mijery ny masony ary mihaino izay rehetra lazainy. Zava-dehibe ny fahatsapan'izy ireo fa manan-danja ao anatin'ny vatan'ny fianakaviana.
Lafiny iray hafa tokony hodinihin'ny ray aman-dreny raha ny faharanitan-tsaina ara-pihetseham-po an'ny zanany dia ny fahafantaran'izy ireo ny fomba hamantarana ny fihetsem-po tsirairay sy hahafantarana izay vokany ateraky ny olona. Manomboka amin'ny fotoana maha-kely azy ireo dia tsy maintsy fantany amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny fahatsapana fototra amin'ny olona rehetra ary iza no sarotra indrindra. Tsy azon'izy ireo atao ny tsy miraharaha ny fihetsem-po toy ny fahasambarana na alahelo.
Ankoatry ny fahalalana ireo fihetsem-po samy hafa dia ilaina koa ny ianaran'izy ireo hatramin'ny fahazazany mba hahafahany maneho azy ireo nefa tsy misy olana. Tokony hanana fahalalahana tanteraka izy ireo rehefa afaka maneho fihetseham-po samy hafa fa tsy hahatsapa tena momba izany.. Ny ray aman-dreny dia tokony hanaja ireo fahatsapana ireo fa tsy haneso azy ireo. Raha mahatsapa izany ny ankizy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy tohanana izy ireo na fihetsem-po ratsy na fihetseham-po tsara izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Ny maha-zava-dehibe ny fahasalamana ara-pihetseham-po amin'ny ankizy
Fa maninona no mivoaka ny bunion?